Tiany aho - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-03 > Tiany aho
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia afaka nahitana fomba mahagaga sy faly aho: "Tia ahy Andriamanitra"! Angamba tsy hitanao izany fahitana mampientam-po izany. Saingy rehefa avy nitazona an'Andriamanitra nandritra ny taona maro ho mpitsara hentitra aho izay niandry ahy fotsiny hanasa ahy raha toa ka mikorisa aho dia fampahafantarana vaovao ho ahy izany.
Ny fifandraisako amin'Andriamanitra - raha azonao atao ny miantso izany ho fifandraisana - nanomboka tamin'ny mbola tovovavy aho. Tadidiko namaky ny Baiboly aho ary nahatsapa fifandraisana sasany amin'io zavaboary tsy mahagaga io. Te hivavaka aminy amin'ny fomba sasany aho, saingy tsy haiko hoe ahoana.
Tsy nahafa-po ahy tanteraka ny fotoam-pivavahako, na dia te hihira ary nandray anjara nandritra ny fotoana fohy aza aho. Nanatrika sekoly fampianarana fialam-boly iray aho tamin'ny fanasana namana iray. Rehefa nifoha ny herinandro dia nankany amin'ny trano fiangonana niaraka tamin'ny mpampianatra iray aho. Niresaka tamiko momba ny filana hanaiky an'i Kristy ho Mpamonjy ahy izy. Ny toetrako anaty dia te-hanao an'io, saingy tsy resy lahatra aho ary nahatsapa fa toa ny serivisy. Mbola tsy fantatro hoe iza Andriamanitra na ahoana no fomba hifandraisany aminy. Taty aoriana dia hitako fa mpanao lalàna sy mpitsara Andriamanitra ao amin'ny fiangonana miorina amin'ny lalàna. Raha tsy nankatò ny lalàny rehetra aho dia fantatro fa ho sahirana lehibe aho.
Avy eo dia nahare toriteny izay nanova ny zava-drehetra aho. Niresaka momba an'Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra momba ny vehivavy ny pasitera satria namorona antsika. Ahoana no hamoronany antsika raha tsy manana ireo toetra sy toetra ireo izy? Mazava ho azy fa mihatra amin'ny lehilahy ihany koa izany. Koa satria nanisy fiheverana ahy ho "lehilahy" Andriamanitra tamiko, dia nihevitra aho fa nataony bebe kokoa ny fomba nitondrany ny lehilahy ary ny vehivavy kosa tsy mitovy. Ity fanambarana iray ity - ary io irery no tadidiko avy amin'ny toriteny - nanokatra ny masoko hahita mpamorona izay mahalala sy mahatakatra ahy. Ny zava-dehibe kokoa dia izay tia ahy. Tiako izy amin'ny androko ratsy, amin'ny androko tsara ary na dia tsy misy olon-kafa toa tia ahy aza. Io fitiavana io dia tsy azo ampitahaina amin'ny karazana fitiavana hafa rehetra fantatro izay tsy fantatro. Fantatro fa tena tia ahy i Dada tamin'izy mbola velona. Tia ahy i Neny, nefa izy tsy maintsy miatrika ny zava-misy iainany raha maty vady izao. Fantatro fa tia ahy ny vadiko, olona mitovy amiko izy ary tsy namboarin'Andriamanitra hameno izay filana rehetra. Fantatro fa tia ahy ireo zanako, saingy mihalehibe izy ireo ary avy eo mihetsika ary ho iray amin'ireo hiantso azy ireo indray mandeha isan-kerinandro aho ary hitsidika andro fialantsasatra.
Andriamanitra irery ihany no tia ahy tsy misy fepetra, tsy manam-petra, tsy manam-petra, tsy manam-petra, tsy manam-petra, manintona, tena kely lavitra noho ny fitiavana mahafinaritra sy mandanilany foana ary feno fitiavana! Mahatalanjona ny fitiavan'Andriamanitra, lehibe tokoa ho an'izao tontolo izao (Jaona 3,16) ary mihatra koa amiko. Fitiavana iray izay ahafahako ho tonga iza aho. Azoko atao ny matoky an'io fitiavana io ary manosika ny tenako hiova. Fitiavana izay manome fiainana aho. Fitiavana izay nahafatesan'i Jesosy io.
Raha mbola mahita an'Andriamanitra araka ny fanaoko aho, dia mieritrereta zavatra iray: "Tena tia anao Andriamanitra"! Hanampy anao io fahalalana io.